काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले अघि बढिरहेको बताएका छन । अर्थमन्त्रलायमा बुधबार डिएफआईडीका स्थायी सचिव म्याथ्यु जोन राईक्राफ्टसँग भएको भेटमा उनले संस्थागत व्यवस्था अन्य अधिकार र कर्तव्यको बाँडफाँड भईसकेकोले यो प्रभावकारी ढंगले अघि बढेको बताएका हुन ।
भेटमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले स्थानीय तहमा न्यायिक पद्धति क्षमता विकासको अभावलाई सुधार गर्न सरकार लागि परेको समेत जानकारी दिएका छन ।
उनले देश एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघात्मक पद्धतिमा रुपान्तरण भएकोले साधन स्रोतको हिस्सेदार, अधिकार र कर्तव्य सन्तुलित रुपमा व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयनको चरण भएको बताएका छन ।
उनले संघीय संरचना बमोजिम प्राकृतिक स्रोत र साधनको यथोचित बाँडफाँड गरी तीनै तहमा कार्यक्रम खर्च र लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको जानकारी दिएका छन ।
मन्त्री खतिवडाले संघीय संरचनामा नेपालको नयाँ अनुभव भएकाले संघात्मक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न छोटो समयमै वित्तीय संघीयता, कानूनी र नीतिगत आधारहरु निर्माण गरिसकिएको स्पष्ट पारेका छन ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले सन्तोषजनक रुपमा गतिलिएको भन्दै यसै वर्ष निजी आवास सम्पन्न भई सक्ने स्पष्ट परेका छन । मन्त्री खतिवडाले बाँकी रहेका सरकारी भवन, संस्था, सम्पदालगायतका क्षेत्रको पुनर्निर्माण गर्न समेत सरकार लागि परेको जानकारी दिएका छन ।
भेटमा डिएफआईडिका स्थायी सचिव राइक्रफ्टले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न आफुहरु तयार रहेको बताएका छन । उनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि तयार भएका कानून तथा नीतिहरुको प्रभावकारी रुपमा व्यवहारिक कार्यान्वयनका चरणमा देखा पर्न सक्ने समस्याहरुलाई बेलायत सरकार सघाउन तयार रहेको बताएका छन ।
उनले नेपाल र बेलायत सरकारबीच दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्ने प्रक्रियालाई समेत अगाडि बढाउने बताएका छन ।
राइक्रफ्टले नेपालको विकासमा बेलायत सरकारसँगै रहेको भन्दै दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध २ सय वर्षभन्दा बढि भएको बताएका छन ।
नेपाललाई हरेक समय बेलायत सहयोग गर्न चाहेको भन्दै भेटमा दुवै पक्षले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा सहकार्य गर्न तयार भएको बताएका हुन ।
व्यवसायीले स्वस्फूर्त कर तिरेपछि हामी अहिले अलि सहज अवस्थामा छौं : अर्थमन्त्री खतिवडासँगको अन्तरवार्ता
एमसीसी रद्ध गरेर अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध बिगार्नु हुँदैन : अर्थमन्त्री खतिवडा
आर्थिक क्षमता अनुसार राहत र पुनर्उत्थानको कार्यक्रम, कोरोना रोकथाममा भएको खर्च सार्वजनिक हुन्छ : अर्थमन्त्री खतिवडा
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा जोडिएको सुरक्षण मुद्रण खरीद प्रक्रिया पारदर्शी हुने वर्तमान सञ्चारमन्त्री डा खतिवडाको दाबी
संसदमा अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग, विद्युतीय गाडीमा अर्बाैंको घोटाला भएको आरोप
लकडाउनलाई देखाएर सेयर बजार बन्द गरेर नबस्न धितोपत्र बोर्डलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन, सेटलमेन्ट समय घटाईने
आर्थिक बर्ष २०७७/७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट, राजस्व संकलन लक्ष्य ८ खर्ब ७९ अर्ब
अर्थमन्त्रीले पेश गरे बजेटका ६१ बुँदे प्राथमिकता र सिद्धान्त, बैंकको लगानी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा, करको दायरा बढाईने (पूर्णपाठ)